Yeyiphi ifuthe kunye nenye indlela yokuVimba kweNtengiso? | Martech Zone
Yeyiphi ifuthe kunye nenye indlela yokuVimba kweNtengiso?
NgoMgqibelo, Oktobha 24, 2015 NgoMgqibelo, Oktobha 24, 2015 Douglas Karr
Ukuba namava e-Intanethi ngaphandle kokuphazanyiswa kukuphazamisa yonke imizuzwana embalwa kuvakala kumnandi. Ngelishwa, ayisiyiyo. Ngokuthintela inani elibalulekileyo leentengiso, abathengi banyanzela abapapashi ukuba bathathe amanyathelo aqatha. Kwaye xa i-iOS 9 ivumela i-Safari ukwandiswa kwesikhangeli kwi-iPhone, Ukwandiswa kweentengiso isuse imarike yabasebenzisi beselfowuni- indawo ephezulu yokukhulisa intengiso.
Olunye uqikelelo lubonisa ukuba uGoogle uphulukene ne-1.86 yezigidigidi kwingeniso yase-US kwi-ad-blocking kwi-2014.
Le infographic evela kuMqondiso, Ukunyuka kweAd blocker, Ibonelela ngeendlela ezintathu zokuzama ukugcina ingeniso yakho yentengiso:
Ukufaneleka kweNtengiso -Ukusebenza kunye neenethiwekhi zentengiso ezingabandakanyi idatha echanekileyo kunokuvelisa iintengiso ezingafanelekanga ezigxotha abathengi kwaye zibakhuthaze ukuba basebenzise iibhloksi zentengiso.
zobuqu -Dibanisa onke amajelo akho ukuqinisekisa ukuba abathengi kunye nabathengi bachongwe ngokufanelekileyo kwaye batya ngokuchanekileyo iintengiso zexabiso.
Intengiso yaBantu -Umqondiso ucebisa abapapashi ukuba bafake intengiso yemveli ukunyusa ingeniso.
Ngelixa iindlela ezimbini zokuqala zikhetha ingcebiso kuye nawuphi na umshicileli, ukhetho lokusebenzisa intengiso yendalo lundenza ndonwabe. Into entle malunga neentengiso kukuba ayinakuphazanyiswa. Intengiso yemveli; kwelinye icala, iphosakele ngokulula ngumxholo. Abapapashi kufuneka benze into ukuze basinde, kodwa andiqondi ukuba licebo elihle ukuba abathengi babatyhalele kule kona.
Phantse abantu abangama-200 ezigidi ngoku basebenzisa isoftware yokuthintela intengiso, ukukhula kwe-41% kwihlabathi liphela kunyaka ophelileyo.
tags: Ingeniso yentengisoUkuthintela intengisozodakaIngeniso yentengisoiintengiso zikaGooglegoogle adwordsiphephacula
I-Wrike: Yandisa ukuvelisa, ukuBambisana, kunye nokuHlanganisa ukuPhuma kweMveliso yakho
Ngaba amadoda nabafazi bakhetha imibala eyahlukileyo?